Etu esi eji mkparịta ụka vidiyo na eCommerce | ECommerce ozi ọma
Ọ bụrụ na ị nwere eCommerce, n'ezie ị guzobewo ọtụtụ ụdị kọntaktị maka ndị ahịa gị mana, You chere na nke video conferencing dị ka otu n'ime ha? Ọ bụ ihe mbụ na obere erigbu ụzọ maka eCommerce, ma ọ na-eweta a mebere ụlọ ọrụ nso ka ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ị tụleghị ya wee chọọ ịmatakwu, gaa n'ihu na-agụ n'ihi na n'ezie anyị ga-egosi gị ihe nwere ike ịba uru maka eCommerce gị.
1 Kedu ihe kpatara iji jiri mkparịta ụka vidiyo na eCommerce
2 Otu esi eji ya maka uru gi
3 Uru na ọghọm nke ogbako vidiyo
3.1 Uru nke nzukọ vidiyo
3.2 Kọ ihe ụfọdụ nke video nzukọ
4 Ndụmọdụ maka ịmekọrịta vidiyo na-aga nke ọma
4.1 Ebe kọmputa na-eme ka videoconference na a "mma" ebe
4.2 Mee onwe gi ka odi mma
4.3 Na-elekọta asụsụ ahụ ... na ndidi gị
4.4 A na-enweta ya n'oge dị iche iche
Kedu ihe kpatara iji jiri mkparịta ụka vidiyo na eCommerce
Zụta na isntanetị bụ ntakịrị anya kpuru ìsì, n'ihi na ịnweghị ike ịhụ, imetụ ma ọ bụ mara ngwaahịa ahụ karịa ihe oyiyi enyere gị na eCommerce. Ma gịnị ma ọ bụrụ na nke ahụ agbanwee? Know maara na, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa ga-aza gị (ma ọ bụ na ọ bụghị).
Ma, ikwu na vidiyo na eCommerce nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti ịzụta n'ịntanetị na inye mmetụta na ị na-agwa mmadụ okwu, dị ka a ga-asị na ị ga-aga ebe a na-eme achịcha ịzụta. N'otu aka, ọ na-eme ka onye ahịa na onye na-ere ya bịaruo nso, na-eche ihu na ha, na karịa ihe niile enwere mmekọrịta nke na-adịkwaghị oyi. Ọ dị mfe karị iru ndị ahịa, ị humanize azụmahịa na-ewu iguzosi ike n'ihe.
Ihe kpatara iji jiri mkparịta ụka vidiyo na eCommerce nwere ike ịdị ọtụtụ, mana ha niile ruru otu nkwubi okwu ahụ: ha na-eme ka eCommerce nweta "ndụ" ebe ọ bụ na anyị na-ahụ karịa ibe weebụ.
Otu esi eji ya maka uru gi
Iji mkpokọta vidiyo dị mfe dị ka ịtọọ oge na ime ka igwefoto gị nwee ike n'oge ahụ ka onye ọ bụla nwee ike ịkpọ gị ma si otú a dokwuo anya obi abụọ tupu ịzụta, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere nsogbu ma chọọ ka ị gakwuru ha.
Iji mee nke a, ị ga-enwerịrị kọmputa (ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka), nwere igwefoto na igwe okwu. Ogo ị na-enye ya, nke ka mma, n'ihi na n'ụzọ ahụ ị ga-enye ọrụ ka mma (nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị nwere njikọ powerfulntanetị dị ike enwere nsogbu ole na ole).
Uru na ọghọm nke ogbako vidiyo
Kedu ka o si dị mma iji mee ka nzukọ vidio maka eCommerce gị? Dị ka anyị chọrọ ka ị nwee uru na ọghọm niile, anyị ga-agwa gị n'okpuru gbasara uru na ọghọm dị na nke a.
Uru nke nzukọ vidiyo
N'ezie, enwere ọtụtụ uru iji kwado usoro nkwukọrịta a na ndị ahịa gị, nke mere na ọ ga-adọta uche. N'ihi na-amalite na Anyị na-ekwu maka otu ụdị ịkpọtụrụ na asọmpi nwere ike ọ gaghị enwe, nke ya, ị kwụpụta. Ma ọ bụrụ na ị na-enyekwa mma, ndị ahịa ga-amalite ịchọpụta gị. Ọ ga-adị ka à ga-asị na ha zụrụ ezigbo ụlọ ahịa.
Ga-ebelata ụgwọ njem, nke mbụ, maka ndị ahịa gị ma ọ bụrụ na ị na-ere ọ bụghị naanị na ịntanetị, kamakwa n'ụzọ anụ ahụ; na nke abụọ, n'ihi na ịchọghị ihe ọ bụla iji nye ọrụ a, na-enwe ike ịnwe oge ọrụ toro ogologo ma bulie ya dabere na ndị ahịa gị.
Anyị na-ekwu maka a ndụmọdụ dị iche iche na, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nke email, ebe ọ bụ na ị hazie ya ma zaghachi ya, eziokwu nke inwe ike ịhụ gị ma gwa gị "site n'aka gị nye gị" (na-egosi nkwanye ùgwù n'etiti onye na-ere ahịa na onye ahịa). mee ka ndị ọrụ ahụ hụ gị itinyekwu aka na azụmahịa gị.
Kọ ihe ụfọdụ nke video nzukọ
Ugbu a, ọ bụghị ihe niile dị mma. Malite n'ihi na ị ga-anọ n'oge ahụ dịnụ, ọ bụghịkwa ihe ndị ahịa ga-arịọ n'oge ọ bụla, nke ha ga-enwe oge ị ga-eji na-enweghị ihe ị ga-eme. You sị, Enwere m ike ịme ihe ọzọ. Ma kpachara anya, n'ihi na Ọ bụrụ na onye ahịa agbaa mbọ ka gị na ya nwee mmekọrịta ma ị geghị ntị, ị ga-emepụta ihe oyiyi adịghị mma.
Ga-enwerịrị ebe ị ga-enweta vidiyo. Ọ bụ ezie na anyị ekwuola na ị chọghị ihe ọ bụla, ihe ị na-eji (igwefoto, igwe okwu, wdg) kwesịrị igosi ezigbo foto na ogo dị mma ka gị na ndị ahịa wee nwee nghọta.
Ndụmọdụ maka ịmekọrịta vidiyo na-aga nke ọma
N'ikpeazụ, anyị achọghị ichefu inye gị ụfọdụ ndụmọdụ ka vidiyo vidiyo na ndị ahịa gị wee gaa nke ọma, ebe ị ga-elebara ụfọdụ akụkụ anya. Kpọmkwem, anyị kwadoro ihe ndị a:
Ebe kọmputa na-eme ka videoconference na a "mma" ebe
Mgbe ị na-eme mkparịta ụka vidiyo, ị ga-egosi ndị ahịa gị otu akụkụ nke azụmahịa gị, ma ọ bụ na mpaghara, n'ọfịs, ma ọ bụ n'ụlọ nke gị. Ugbu a, were ya na ihe ị na-ahụ n’azụ bụ ọkara agba ma ọ bụ mgbidi ruru unyi. Ma ọ bụ nke ka njọ, ha na-ahụ ọtụtụ ngwaahịa, ngwakọ ... you chere na ha ga-atụkwasị gị obi?
Mkpa chọta gị ebe na-enye ọrụ gị ọrụ ọkachamara. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, jiri ihe dị n’azụ na-enye gị ohere itinye akara ngosi nke ụlọ ọrụ gị ka ha nwee ike ịkọwa ya ma si otú a ghara ichefu na ọ bụ ụlọ ọrụ ha na ha na-ekwurịta okwu.
Mee onwe gi ka odi mma
N'iburu n'uche "ọdịda" nke ị na-echeta n'ezie n'ihi na ha malitere ịrịa ọrịa, anyị na-akwado ka ị jiri ejiji mara mma. Site na ala. Ya bụ, yikwasị uwe ị ga-eji gaa n’okporo ụzọ, ma ọ bụ nke ị ga-eji jeere ndị ahịa gị ozi.
O gini mere anyi ji gwa gi si n'elu rue ala? Ee, anyị maara na vidiyo vidiyo na-emekarị ịnọdụ ala. Ma gịnị ma ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla kpatara ị ga-eji bilie? Gịnị ma ọ bụrụ na i yikwaghị ihe ọ bụla “mara mma” n'okpuru? Onye ahịa gị ga - ahụ gị wee nwee ike inwe echiche ọjọọ banyere gị. Ya mere, gbalịa ịdị mma maka oku ihu na ihu.
Na-elekọta asụsụ ahụ ... na ndidi gị
I gha iburu n'uche na a video ogbako abụghị otu na ihu na ihu. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịma na nke a na-ada ada mgbe ụfọdụ, ụda na-akwụsịlata, ihe oyiyi a na-akpụkọta ... Ya mere jiri ndidi na-ejide onwe gị makana ha bụ ihe ndị ị na-agaghị ahụli.
Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ha agwa gị ka ị kwughachi ihe, ma ọ bụ ka ị kọwaara ha ya ọzọ, ọ bụghị n'ihi na ha aghọtaghị gị, kama ọ bụ n'ihi na ha nwekwara ike imehie ihe nakwa na ozi gị anaghị ezi ezi. N'okwu ndị ahụ, gbalịa iji azịza ha na-achọ mee ihe kpọmkwem, gbakwunye ịkọwapụta ihe nke ọma dị ka o kwere mee.
A na-enweta ya n'oge dị iche iche
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imeli mkparịta ụka vidiyo n'oge awa azụmahịa. Oge ụfọdụ ọrụ ha, ndụ ụbọchị ha-na-eme ka ha ghara isi ike.
Yabụ, ihe nwekwara ike Guzo na mpi gi site na inye otutu awa karia, ma ọ bụ n’oge dị iche iche karịa nkịtị. Dịka ọmụmaatụ, site na 7 ruo 9 n'ụtụtụ, ma ọ bụ site na 8 ruo 10 na 11 n'abalị. Ee, oge ndị a bụ oge ị na-ekwesịghị ịrụ ọrụ. Ma ndị ahịa ga-enwe ekele maka ya n'ihi na ị naghị amanye ha ka ha "dabara" ajụjụ ha n'ime usoro iheomume ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Etu esi eji mkparịta ụka vidiyo na eCommerce
Gịnị bụ pọdkastị na gịnị bụ uru ya maka eCommerce